१२ मंसिर २०७४ १६:१९
सडक र यातायातलाई विकासको पूर्वाधार मानिन्छ । हामी पूर्वाधारको अभावमा छट्पटाइरहेका छौं । अझ भएका पूर्वाधारहरु समेत ब्यवस्थित गर्न सकिएको छैन र त्यसबाट उत्पन्न हुने हानिनोक्सानी ब्यहोर्न बाध्य छौं । सडक र यातायातको ब्यवस्थापन आजको मुख्य चुनौती हो । त्यसलाई ब्यवस्थापन गर्ने विविध प्रयासहहरु विश्वब्यापी रुपमा भएका छन् । सोहि सन्दर्भमा विश्वस्तरीय संगठनहहरुले विभिन्न नयाँ प्रविधिहरु प्रयोगमा ल्याएका छन्। पछिल्लो समयमा सुरक्षित सडक र यातायातको लागि रोड सेफ्टी अडिट आशलाग्दो प्रयोग बन्न सक्ने देखिन्छ ।
विकासको आधार , सडक र यातायात : आधुनिक समाजको निम्ति सडक र यातायातको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको तथ्य कसैले नकार्न सक्दैन । भानिन्छ आज जुन देशमा गाडीको गति जति हुन्छ, त्यो देशमा बिकासको गति पनि त्यति नै हुन्छ । आज यूरोपको बिकासको कारण ‘यूरो’ हैन त्यहाँको रेल्वे र सडक संजाल हुन, सामुन्द्रिक पहूँच त छदैछ तर त्यसलाई पनि मोबिलिटीको लागि प्रयोग गर्न सक्नु भने पर्यो । सामान्यतया आज ठूलो र दिगो हाईवे र त्यसको संजाल , समयानुकुल र बैज्ञानिक यातायात ब्यबस्थापन , रेल र तेल माथिको पहूँच , जल यातायात तथा मास ट्रान्सपोर्ट अनि उर्जा र बैकल्पिक उर्जा माथिको सहज ब्यबस्थापन नै बिकासका लागि आधारभूत सर्त हुन ।
सडक र सवारीले जनताको चौतर्फि विकास जस्तै शिक्षा , स्वास्थ्य , खाद्यान्न र आधारभुत संरचना माथि सहज र सुलव पहूँच पुर्याउछ । नेपाल जस्तो भौगोलिक अवस्था भएको देशमा त झन सडक र यातायातको महत्व को बारेमा चर्चा नै गर्न पर्दैन होला किनकि ति हाम्रा लागि मेरुदण्ड होइन मुटु नै हुन | पछिल्लो समय चीनले सडक यातायातमा गरेको चमत्कारिक प्रगतिले नै उसलाई आज महाशक्तिको संज्ञा दिलाएको छ अनि हाम्रो देशमा सडक नै राजनीतिको केन्द्र मा भएको अवस्थाले पनि त्यसको उपादेयता कति रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
नेपालमा सडक र सवारी : अहिले काठमाडौंमा १० लाखको हाराहारीमा सवारी साधनहहरु गुरिडरहेका छन भने नेपालमा २० लाखको हाराहारीमा र यो संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । सवारी साधनको संख्या नबढ्ने हो भने अहिलेको विद्यामान सडकले दीर्घाकालीन रुपमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्छ । तर यो सम्भव छैन । गाडीको आयातमा रोक लगाउने अवस्थापनि छैन । दिनप्रतिदिन सवारी साधनको संख्यामा वृद्धि हुने भएकाले ट्राफिक समस्या फेरि आउनेछ । नेपालमा सडकसंजाल ८७००० किमि रहेको छ जुन हाम्रो लागि अँझ अपर्याप्त देखिन्छ । मोटरसाइकलको संख्या ७० प्रतिसत भन्दा ज्यादा छ । जुन हाम्रो लागि ठूलो चिन्ता को बिषय हो । सवारी साधन र इन्धनको लागि खर्च भैरहेको अत्यन्त ठूलो धन राशि जोगाउने हो र ट्राफिक ब्यबस्थापन गर्ने हो भने मास ट्रान्र्सपोटेशन र सार्वजनिक यातायातमा ध्यान दिन जरुरि छ | सडकको लम्बाई भन्दा फराकिलोपनमा बढी ध्यान दिन जरुरि देखिन्छ
यातायात व्यवस्थापन आजको चुनौती : आज संसारमा नै ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सडकको निर्माणका साथसाथै सार्वजनिक सवारी साधनको राम्रो विकास र यसको क्षमता वृद्धि नै उपयुक्त माध्यम मानिएको छ । हालसालै काठमाण्डौंका सडकहरु चौडा गर्ने कामलाई इतिहासको निकै ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको अग्रसरतामा यो सम्भव भयो । अब अर्को प्रधानमन्त्री या निकाय चाहियो जसले सार्वजनिक यातायातको विकास र यसको क्षमता वृद्धि गर्न ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकोस । आज संसार भरिनै ट्राफिक जाम नियन्त्रण गर्न फाराकिलो सडकको र बढ्दो निजी गाडीको नियन्त्रण प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ ।
यद्यपि विकसित राष्ट्रमा सवारी साधनको राम्रो व्यवस्था हुँदा त्यहाँको ट्राफिक समस्या हल नै भएको देखिन्छ । मुख्यतः सडकहरु सवारी साधनका लागि विकास भएको देखिन्छ । तर सडक भनेको सवारी साधन, पैदलयात्री, साइकलयात्री, सबैको साझाथलो हो । निजी सवारी साधन हुने व्यक्तिहहरु देशको अल्पसंख्यक हो तर राजनीतिक कार्यशक्ति उनीहरकै हातमा हुन्छ । त्यसैले सडकको विकास गर्दा निजी सवारीलाई प्राथमिकतामा राखेर विकास गर्छन् । यसको उदाहरणको लागि हेर्दा सडक चिल्ला र फाराकिला बनाइन्छ तर पैदलयात्री मार्ग साँघुरा र सडक बनाएपछि मात्र बनाउन अभ्यास गरिन्छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि पहिले पैदलयात्रीमार्ग बनाउनुपर्छ त्यसपछि सवारी सवारीसाधनका लागि सडक ।
सडक दुर्घटना लापरबाही कि बाध्यता : ट्राफिक व्यवस्थापन यातायातको सहज प्रवाहको लागि गरिने निर्देशन, नियन्त्रण र रेखदेख गर्ने कार्य हो । जसले सडकमा सवारी आउजाउ सरल पार्छ । यसले आउजाउका साथसाथै सडकको सुरक्षाको पनि जिम्मेवारी लिन्छ । नेपाल जस्तो देश जहाँ आज २१ औं शताब्दीमा पनि ट्राफिक प्रहरीहरुले हातको इशारा र सिट्ठीको भरमा ट्राफिक व्यवस्थापन गरिन्छ, त्यस्तो देश चौडा सडकले झन ट्राफिक समस्यमाका साथसाथै सडक दुर्घटनामा पनि वृद्धि हुने सम्भावना पनि निम्त्याउछ । त्यसैले यसबारेमा सोच्नु निकै जरुरी छ ।
आज मोटरसाइकल अर्को सवारी हो जसको वृद्धि व्यवस्थापनको लागि अर्को चुनौती हो जुन समाधान गर्न यसको प्रयोगमा प्रतिबन्ध गर्ने समाधान हैन तर मोटरसाइकल प्रयोगकर्तालाई सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ । वर्षाको समयमा पानीमा रुझेर र जाडोको समयमा जाडो सहेर मोटरसाइकालमा सवारी गर्नुपर्ने बाध्यता हुदाँहुदै पनि विश्वासिलो सार्वजनिक यातायातको सुविधा नहुदाँ यात्रुहरु मोटरसाइकलमा सवार हुनु पर्ने बाध्यता छ ।
भरपर्दो सार्वजनिक यातायात भयो भने उनीहरु सवारीको माध्यम परिवर्तन गर्छन् । यो संसारकै विकसित देशको उदाहरणले प्रष्ट पारेको छ । त्यसैले ट्राफिक व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि सडकहरु चौडा गर्ने कार्य र सार्वजनिक यातायातको विकास सँगसगै अगाडि बढाउनुपर्दछ ।
सडक सुरक्षा सोच्नै पर्ने विषय : सडक दुर्घटनामा मुख्य दोषी चालक मात्र होइन, सडकको अवस्था, पहाडी बाटोमा सवारी चलाउन चाहिने अनुभवन भएका अपरिपक्व चालकलाई सवारी चलाउन अनुमतिदिने निकाय पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। यस्तै सवारीसाधनको नियमित चेक जाँच नहुँदा यान्त्रिक गडबढी भई दुर्घटना हुने गरेका छन | नियम पालना गर्ने, गराउने दुवै निकायको कमजोरी समेत दुर्घटना को कारण हो । पहाडी, घुमाउरो र साघुँरो बाटो मा सवारीसाधन गुडाउन चालक अनुमतिपत्र मात्र भएर हुँदैन, बाटो अनुसार सवारी गुडाउन अनुभवको समेत आवश्यकता पर्छ। नेपालमा हेल्पर बाट चालकले सिकाएकै भरमा ठूला सवारीसाधनको चालक अनुमतिपत्र पाउने चलन छ ।
अनुमतिपत्र पाएकै अर्को दिन आफैं सवारीसाधन किनेर भए पनि चलाउने गरेको पाइन्छ । यातायात व्यवसायी समिति, नियमन निकाय र सवारी धनीले दुर्घटना नहुँदासम्म आफूले गरेको त्रुटिको वास्ता नगर्दासमेत दुर्घटना बढेका छन् । अपरिपक्व सवारी चालकलाई सयौं यात्रु बोकेर सवारी साधन गुडाउन दिने सवारी धनीसमेत दुर्घटनाका कारण हुन् । विदेशमा ठूला सवारी साधनको चालक अनुमतिपत्र पाउन निश्चित अवधि साना सवारी साधन चलाउने अनुमतिपत्र पाएको हुनुपर्छ । यस्तै प्राकृतिक मौसमअनुसार समेत सडकमा सवारी गति मापन गर्ने वैज्ञानिक तरिका छन् तर नेपालमा त्यसको कुनै प्रचलन छैन । लेख्न र भन्न सार्वजनिक सवारी साधन प्रतिघन्टा ४० किलोमिटर भनिन्छ तर व्यवहारमा सडक खुल्ला हुने स्थितिमा चालकले धेरै नै गतिमा सवारी साधान चालउँछन् ।
पहाडी बाटोको सुधार पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । पहाडी बाटोमा फलामे बार नहुँदा सवारी साधन हजारौं मिटर तल खस्दा जीउधनको क्षति बढी हुने गरेको छ । यस्तै बाटो नबन्दै स्थानीयकै पहल र दबाबमा सवारी साधन गुडाउन अनुमति दिँदा दुर्घटना र सडकको अवस्था बिग्रिएको हो । सडक दुर्घटनापछि गल्ती देखिएका चालकले समेत व्यवसायी र श्रमिक समितिको चर्को दबाबमा सजिलै उन्मुक्ति पाउँदा समेत दुर्घटनामा एकै प्रकारका गल्ती दोहोरिरहेका छन् । नेपालमा सडक निर्माण गर्ने निकाय, सवारी साधन र चालकको अनुमतिपत्र दिने निकाय र त्यस्को नियमन गर्ने निकाय बेग्लाबेग्लै छन् । यी सबै निकाय बीच समन्वय अनिवार्य भए पनि निश्चित अवसर र अवस्थामा बाहेक त्यसको अभाव देखिन्छ ।
फराकिला सडक संजाल बिकसित देशका परिचय नै बन्न थालेको छ | फोटो: pixabay.com
सडक सुरक्षाका आधारहरु : सडक सुरक्षमा सुधार गर्न मुख्य रुपमा चार प्रमुख विषयमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ । सडक पूर्वाधारमा सुधार, सावारी साधानको उच्च प्राविधिक अवस्था, कानूनको पालना, सडक प्रयोगकर्ताको अनुशास र आपतकालीन उपचार , यी सबै सडक सुरक्षाको मापदण्ड अनुसारले बनाउनु पर्छ । यान्त्रिक गडबडी रोक्न समय समयमा सवारी चेकजाँच गराउनुपर्छ । सत प्रतिशत कन्डिसनको गाडीमात्र चलाउनु पर्छ । बिग्रिएको गाडी चलाउनु भनेको बिरामी मानिसलाई काम लगाउनु जस्तै हो । सवारी साधन कन्डिसनमा छ कि छैन भनेर सरकारी निकायले समय समयमा चेक जाँचगर्नु पर्छ ।
सडक प्रयोगकर्ता सबैलाई ट्राफिक ज्ञानको आवश्यकता छ । पैदलयात्रीले आकाशेपुललाई त्यति प्रयोग गर्दैनन् । यसको उपयोगिताबारे चेतना फैलाउन आवश्यक देखिन्छ । जेब्राक्रसिङबारे पनि कमैले ध्यान दिन्छन् । त्यसैले आज ट्राफिक शिक्षा अझै महत्वपूर्ण देखिन्छ | दुर्घटना पछि उद्दार र आपतकालिन उपचार व्यवस्थाको विकास गर्नुपर्छ । उद्दार कार्य र आपतकालिन उपचार जति चुस्त हुन्छ यसले मानवियक्षति कम गर्न सघाउँछ । विकसित मुलुकमा आपतकालीन हेलिकप्टर र सवारीसाधन तम्तयार राखिन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय ट्राफिक नियमको कार्यान्वयन । सडकका मुख्य प्रयोगकर्ताहरु चालक, साईकलयात्री र पैदलयात्री हुन । सडक सवैको साझा सम्पत्ती भएकाले सबैको उत्तिकै अधिकार हुन्छ । एक अर्काको अधिकार हनन् नहुने गरी कानूनको पालना गर्नुपर्छ । फुटपाथमा गरिने पार्किङ, राखिने पसलले पैदलयात्री सडकबाट हिड्न बाध्य हुन्छन् । यसले पनि दुर्घटना गराइरहेका छन् । यसैले सडकमा गरिने पार्किङ र राखिने पसलको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
इभान्स (सन् १९८२) का अनुसार वैज्ञानिक ट्राफिक व्यवस्थापन गरी कानून कडाईका साथ लागू गर्ने हो भने ४० प्रतिशत दुर्घटनामा कमी आउछ । उनका अनुसार ट्राफिक कानून लागू गर्ने तीन कदमहरु छन् । पहिलो, ट्राफिक सम्बन्धित कानून विकास गरेर पास गराउनुपर्छ । दोस्रो, यस्ता ट्राफिक नियमको कार्यनव्यन जसले गर्दा हरेक सडक प्रयोगकर्तालाई कानून पालना गर्न बाध्य बनाउछ । तेस्रो, यस्तो नियम पालना नगर्नेलाई कारबाहीगनु पर्छ । तथ्याङ्कहरुले देखाए अनुसार दुर्घटनास्थलको कारबाही नै प्रभावशाली हुन्छ । कानून मिच्नेलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नु पर्छ ताकि उसले यस्तो गल्ति नदोहोर्याओस । विश्वका अधिकांश मुलुकले वैज्ञानिक ट्राफिक व्यवस्थापन अपनाउन थालिसकेका छन् । नेपालले पनि बेलैमा यस्तो व्यवस्थापन अपनाएर सडक दुर्घटना घटाउन अहम् भूमिका खेल्न ढिला गर्न हुन्न ।
रोड सफ्टी र उत्पादकत्व र यस बारेमा त आजसम्म हाम्रो बिचमा छलफल नै भएको छैन भन्दा हुन्छ । आजसम्म पनि हामी दुर्घटनामा यति जना मरे र घाइते भए भन्ने मात्र सुन्छौं र सुनाउछौं । हामी निमयित उद्वार, उपचार र कानूनी ब्यबस्थामा मात्र संलग्न भएकोले कुनै पनि दुर्घटनाबाट हुने आर्थिक , सामाजिक ,मनोबैज्ञानिक तथ्यांक त के अनुमान सम्म गर्न सकेका छैनौं ।
ज्यान गुमाउने को पारिवारिक ब्यबस्थापन, काजक्रिया र परम्परागत कार्य ,घाईते को उद्द्वार र उपचार खर्च क्ष्यतिपूर्ति , कुनै दुर्घटना पछि हुने चक्काजाम ,तोडफोड र झैँ–झगडा अनि त्यसले पुर्याउने क्ष्यति, घाइतेको निगरानी र उपचार खर्च, अनि तिनको नियमित रेखदेख र स्याहार सुसार जस्ता अत्यन्त संवेदनशील बिषयमा त हामी कहिले पुग्ने होला ? हामी किन नेपाल विकास नभएको भन्दा , नेता खराब भएर भन्ने एकलकाटे र अवैज्ञानिक जवाफ दिन्छौं । एउटा अनुमान गरौं त नेपालमा भएका ठूला १०० वटा दुर्घटना (वार्षिक) पछिको लफडामा ३०० जना व्यक्ति २ दिन मात्र संलग्न रहे भने हाम्रो कति जनशक्ति खर्च हुन्छ होला ? तिनले गर्ने खर्चले कुनै सानो उद्योग खोल्न पो पुग्थ्यो कि ?
आज नेपालमा भएका पचासौं हजार घाइते र तिनको रेखदेखमा संलग्नले कति काम गर्थे होला ? अनि अर्थोपेडिक अस्पतालमा भएको लगानी, उपचार खर्च अनि कुरुवाले कति पिडा र खर्च व्यहोरेका होलान ? त्यस बाट हाम्रो उत्पादकत्वमा कति असर परेको होला ? हामी त अनुमान गर्न समेत नसक्ने अवस्थामा छौं ।
रोड सेफ्टी अडिट : रोड सेफ्टी अडिट बेलायतबाट सन् १९८८ मा सुरु भएको हो । यसमा सडकमा सम्भावित दुर्घटना गराउने तत्वको अध्ययन गरिन्छ र त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने सिफारिस गरिन्छ । यो अडिट गर्दा सडकमा नै गएर अवलोकन गरी दुर्घटना गराउने तत्व पत्ता लागइन्छ । नयाँ सडक विकास गर्दा यसलाई योजना, निर्माण र निर्माण सकिए पछि अडिटिङ गरिन्छ भने चालु सडकमा पनि गरिन्छ । अहिले संसारका विकसित देशहरुमा रोड सेफ्टी अडिटले निकै महत्व पाएको छ किनकी संसारमा सडक दुर्घटनाबाट १३ लाख मानिसको वषेर्नी मृत्यु हुने गरेको छ । रोड सेफ्टी अडिट गर्दा मुख्यतया ८ वटा चरणहरु हुन्छन ।
पहिलो : परियोजना निक्र्यौल गर्ने,
दोस्रो : अडिट टोली बनाउने र टोली नेता चयनगर्ने,
तेस्रा : अडिट गर्ने सडक खण्डको निरिक्षण गर्ने,
चौथो : निरिक्षणको आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्ने,
पाँचौ : प्रतिवेदनको प्रस्तुतिकरण सम्बन्धित निकायलाई गर्ने,
छैठौ : निकायहरुको राय सुझाव अनुसार प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने,
सातौ : प्रतिवेदनको सुझावअनुसार कार्यान्वयन गर्ने र
आठौ : अन्त्यमा मूल्यांकन गर्ने
रोड सेफ्टी अडिटका लागि विभिन्न पृष्ठभूमि भएका मानिसहरुको टोली बनाउनु पर्ने हुन्छ । यसमा यातायात तथा ट्राफिक इन्जिनियर हुनै पर्दछ भने अरु सदस्यहरु कानून, व्यवस्थापन, मनोवैज्ञानिक, प्रहरी, त्यस सडक खण्डका स्थानीयहरु साथै अन्य सम्बन्धित विज्ञहरु समेत समावेश गरिनु पर्दछ । यसो गर्दा सबैको दृष्टिकोण आउछ । किनभने सकडको सुरक्षा भनेको प्राविधिक विषयमात्र नभएर सामाजिक, वातावरणीय, कानून तथा व्यवस्थापन र अर्थ सम्बन्धि विषयहरु पनि हो । यस टोलीमा खालि इन्जिनियरहरु मात्र समावेश गरियो भने प्राविधिक पक्षहरु मात्र समेटिने हुँदा अन्य क्षेत्रको पनि समेट्दा राम्रो र प्रभावकारी प्रतिवेदन बन्दछ ।
नेपालमा रोड सेफ्टी अडिट हाल सम्म पनि शुरु गरिएको इतिहास छैन । तर नेपालमा यसको धेरै नै आवश्यकता देखिन्छ । नेपालको सडक संजालहरु सबै कम गुणस्तरका छन् । रोड सेफ्टी अडिट गरी हरेक सडक खण्डको दुर्घटना गराउने कारणहरु पत्ता लगाई त्यसको तुरुन्त सुधार गर्न जरुरी छ । यसको लागि नेपाल सरकारले एउटा टोली निर्माण गरी पाइलट परियोजनाको रुपमा यसाशिघ्र काम प्रारम्भ गरिहाल्नु पर्छ ।
आशिष गजुरेल, गोबिन्द भट्टराई
ट्रान्सपोर्टेसन सल्लाहकारका रुपमा कार्यरत, यातायात तथा ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियर